jaketaw85: မောင်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့်က ရခိုင်အမျိုးသားတဦးကို တိုက်ခိုက်
မောင်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့်က ရခိုင်အမျိုးသားတဦးကို တိုက်ခိုက်
တိုက်ခိုက်ခံရသူမှာ မောင်တောမြို့နယ် ရွာသာယာကျေးရွာမှ ဦး အောင်လှဖြူ ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ လ ၁၄ ရက် သောကြာနေ့ ညနေ ၈ နာရီကျော်ခန့်တွင် လယ်တဲ စောင့် နေစဉ် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့်က သေနတ် တုတ်ဓါးများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဖြစ်ပွားပုံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဦးအောင်လှဖြူ၏ မိသားစုဝင်တဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ဖြစ်တာက ည ၈ နာရီမှာ ဖြစ်တာပါ။ လယ်တဲမှာဖြစ်တာပါ။ လယ်တဲနဲ့ ရွာနဲ့က ၅ မိ နစ်ခန့် ဝေးပါတယ်။ သူက အသက် ၆၀ နီးပါးရှိပါပြီ။ ဒဏ်ရာတွေက ၀မ်းဗိုက်နဲ့ လည်ပင်းမှာ ဒဏ်ရာ ၃ ချက်ရှိ ပါ တယ်။ အားလုံးက ဓါးဒဏ်ရာပါ။ သူက ရွာနဲ့နီးတဲ့ အတွက် သူ့မယားနဲ့ လယ်တဲ စောင့်နေတာပါ။ ပြဿနာ ဖြစ်မှ အော်သံကြားတဲ့အတွက် ရွာကလူတွေ လိုက်သွားတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မြေကြီးမှာ လဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဦးအောင်လှဖြူအား တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများမှာ ပန်းဇင်းပြင်ရွာနှင့် ညောင်ချောင်း ဘင်္ဂလီရွာမှ ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောကြားသ်ာလည်း နိရဉ္စရာမှ သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
“ သူတို့လယ်တဲကို လာပြီး ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့်က လာဝိုင်းတဲ့အတွက် အော်တဲ့အချိန်မှာ ရွာသားတွေ ထွက်လိုက်သွားတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးသွားတယ်။ အောင် လှဖြူမှာတော့ ဓါးဒဏ်ရာ ၃ ချက်နဲ့ အခုတော့ မောင်တော ဆေးရုံ ကိုပို့ထားပါတယ်။ သေမယ် ရှင်မယ်တော့မသိရပါဘူး” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အောင်လှဖြူ၏ ဇနီးဖြစ်သူမှာ လယ်တဲမှ ထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ ကျေးရွာတွင် အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် နစက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးရောက်ရှိ နေပြီး လုံခြုံရေးယူထားကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။
Posted by Jake taw at 11:00:00 PM
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ နိုဘဲလ်ငြိမ...
စက်တင်ဘာလ၂၂ရက်နေ့တွင် ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ငွေဖြည့်ကတ် စတင...
မောင်တောမြို့တွင် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့်က ရခိုင်အမျိုးသားတဥ...
နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဟိုတယ်အခန်းအတွင်း တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့သည့် ဆီဒိုးနား လျှို့ဝှက် ကင်မရာ ရိုက်ကူးထားသည် ဗီဒီယိုဖိုင်များ ပြန့်နှံ့နေ
ရန်ကုန် ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်၍ ရိုက်ကူးထ...
Emergency Contraception (2) အရေးပေါ်တားဆေးများ (၂)
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၅) Ecee2 ဆေးဆိုတာ Apr 4, 2011 at 10:36 AM ကျမ အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့က တလမှာ ၂ ...
Love (2015) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Jaketaw85 ဘလော့ထဲကိုဝင်ရောက်လေ့လာသူတွေ အပန်းပြေကြည့်ရှု့နိုင်ဖို့ 21+ ဇတ်ကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် download link ကတော့ မူရင်းတင်ထားတဲ့ goldchan...
09/10/2010 တစ်ယောက်က နိဒါန်းစာမျက်နှာမှာ ကွန်မန့်ရေးသွားတယ်။ ရှင်တွေ ထပ်နေပေမယ့် မိန်းကလေးအစစ်က မေးတာဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်၊ ဖြစ်ချ...
Papillon (1973) မြန်မာစာတန်းထိုး
Papillon ရုပ်ရှင်ဟာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ တစ်ကျွန်းကျ အကျဉ်းသား တစ်ယောက်ရဲ့ ထောင်ဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းအားအကောင်းဆံ...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂၉) သည်းခြေကြိုက် ခေါင်းစဉ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေး နယ်ပယ်မှာလဲ ခေတ်စားပါတယ်။ “(ကီးဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့် ...
Google ကို မြန်မာ domain .com.mm မှ မူရင်း .com သို့ပြောင်းဝင်မယ်
ကျွန်တော်တို့ Google.com သို့ဝင်ရင် မြန်မာ ဒိုမိန်း ရှိတာ မို့ ဘယ်လိုဘဲ ရိုက်ရိုက် .com.mm ဒိုမိန်းနဲ့ဘဲ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. Google...
ရွှေရောင် သံလိုက် အိမ်မြှောင် (၂၀၀၇) မြန်မာစာတန်းထိုး
၀ိဥာဉ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေကြတယ်... ငါတို့ ကမ္ဘာမှာတော့... ငါတို့ဝိဥာဉ်တွေက ငါတို့ဘေးမှာလမ်းလျှောက်ပြီးနေကြတယ်လေ။ နိဒါန်းလေးကြည့်လိ...
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) pdm2009) ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၈)
21.8.2017 Nay Pyi Taw ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) pdm2009) ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတ...
Q and A Pills တားဆေး အမေး-အဖြေ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၄၅)9Feb 11, 20:08 သမီးအသက် ၂၅။ အိမ်ထောင်နဲ့ပါ။ ၁ လဆေး သောက်ပါတယ်။ ဒီလက ဆေးသောက်ဖို့ ၃ ရက် ပျက်သွားပါ...
vpn france Creación web Sevilla
ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဦးသိနျးဆှေ၊ IOM Chief of Mission in Myanmar ၊ Mr. Akio Makayama ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ အား လကျခံတှဆေုံ့ဆှေးနှေး
Copyright © jaketaw85 Co., Ltd. Theme images by PLAINVIEW. Powered by Blogger.